AAPP | Assistance Association for Political Prisoners » Blog Archive » ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ လစဥ္အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
Home > Chronology (Burmese) > ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ လစဥ္အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
Posted on October 7, 2020 • Posted in Chronology (Burmese), Slide show (Burmese)
စက်တင်ဘာလ သုံးသပ်ချက် ၂.
တစ်လအတွင်း သတင်းသုံးသပ်ချက် ၄.
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ ဖမ်းဆီးမှု ၁၇.
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ ပြန်လွှတ်ပေးခြင်း ၁၇.
နိုင်ငံရေးနှင့်နိုင်ငံသားတို့၏လွတ်လပ်ခွင့်အပေါ် တားမြစ်ခြင်းများနှင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ ၁၉.
ဆက်စပ်သတင်းများဖတ်ရန် Links ၂၉.
စက်တင်ဘာလအတွင်း စုစုပေါင်း (၄၁) ဦး အမှုဖွင့်၊ တရားစွဲဆိုခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထို (၄၁) ဦးအနက်မှ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ မောင်တော နှင့် ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ် တို့မှ အရပ်သား အရပ်သား (၅) ဦးနှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုး (၁) ဦးသည် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၀(က)/၅၂(က)(ခ) သို့မဟုတ် ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂ တို့ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကယားပြည်နယ်၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်မှ NLD လူငယ် (၁) ဦးသည် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှ ကျောင်းသား (၃၄) ဦးသည် ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့် နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် (ငြိမ်း၊စု၊စီ) ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ (သို့) ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅ (က) (ခ)၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ တို့ဖြင့်လည်းကောင်း အသီးသီး အမှုဖွင့်၊တရားစွဲဆိုခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
စက်တင်ဘာလအတွင်း စုစုပေါင်း (၁၀၅) ဦး ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထို (၁၀၅) ဦးအနက်မှ ရခိုင့်အရေးနှင့်ဆက်နွယ်၍ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အရပ်သား (၄) ဦး ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီး ကျောင်းသား (၂၃) ဦးသည် ငြိမ်း၊စု၊စီ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ (သို့) ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅(က)(ခ)၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ တို့ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်မှ အရပ်သား (၂) ဦး သည် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ၅၂(က)(ခ) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်မှ အရပ်သား (၂) ဦး နှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး (၁) ဦးသည် ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့်လည်းကောင်း ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီး ကျန်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် အရပ်သား (၇၃) ဦးသည် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ မြေပုံ၊ မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော် မြို့နယ်များမှ ဖြစ်ကြသည်။
စက်တင်ဘာလအတွင်း စုစုပေါင်း (၇) ဦး ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထို (၇) ဦးအနက်မှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ (၃) ဦး နှင့် ကျောင်းသား (၁) ဦးသည် ငြိမ်း၊စု၊စီ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ (သို့) ပုဒ်မ ၂၀ ဖြင့် လည်းကောင်း၊ အရပ်သား (၁) ဦးသည် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ၅၀(ည) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အရပ်သား (၁) ဦးသည် ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ဖြင့် လည်းကောင်း ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး ကျန်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ (၁) ဦးသည် ငြိမ်း၊စု၊စီဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ ဖြင့် ဒဏ်ငွေ ပေးဆောင်စေရန် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ဩဂုတ်လအတွင်း စုစုပေါင်း (၈၅) ဦး လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား နှစ်ဦးဖြစ်သော ကိုနေမျိုးဇင်၊ ကိုသိန်းအောင်မြတ် နှင့် ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်သံချပ်အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင် ကိုဇေယျာလွင် တို့သည် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်း မရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ထို့ပြင် စက်တင်ဘာလအတွင်း ရှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ/ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA) မှ တအာင်း အမျိုးသားပါတီ(TNP) အဖွဲ့ဝင် (၁) ဦးအား ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
၎င်းပြင် စက်တင်ဘာလအတွင်း ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)မှ ၎င်းတို့ ဖမ်းဆီး၊ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သော သံဃာတော် (၄) ပါးကို ပြန်လည် လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ၏ အနှစ်အရသာမှာ ပြည်သူ့ထံမှ ဆင်းသက်လာသော အာဏာကို ပြည်သူတို့အတွက် ပြည်သူတို့ထံသို့ ပြန်လည်စီးဆင်းစေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဒီမိုကရေစီ၏ အနှစ်သာရ နှင့် စံနှုန်းများကို ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲ ပြည်သူ့အာဏာဆိုသည်မှာ မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ်နေဆဲဖြစ်ပြီး ပြည်သူများ၏ အခြေခံအခွင့်အရေးများသည် ဆက်လက်ဆုံးရှုံးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရာတွင် အခြေခံကျသည့်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်၊ပြောဆိုခွင့်ကို ကျင့်သုံးသူများသည် ဖိနှိပ်၊ ကန့်သတ်မှုများကိုသာ ရင်ဆိုင်နေကြရဆဲဖြစ်သည်သာမက ဖမ်းဆီး၊ တရားစွဲဆိုမှုများကို ရင်ဆိုင်နေကြရခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းမှ သွေဖည်လျက်ရှိသည်ကို ထင်ရှားစွာ ပြသလျက်ရှိသည်။
စက်တင်ဘာလအတွင်းတွင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်၊ပြောဆိုခွင့်ကို ပိုမို တင်းကျပ်စွာဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရ သည်။ စက်တင်ဘာလအတွင်း ရခိုင့်အရေးနှင့်ဆက်နွယ်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်းအတွက် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မိထ္ထီလာ၊ မုံရွာ၊ ပခုက္ကူ နှင့် ပြည်စသည့် မြို့နယ်များမှ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နှင့် ကျောင်းသား စုစုပေါင်း (၃၄) ဦးသည် ငြိမ်း၊စု၊စီ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ (သို့) ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅(က)(ခ) (သို့) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ တို့ဖြင့် အသီးသီး တရားစွဲဆို ခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး ၎င်းတို့အနက်မှ ကျောင်းသား (၂၃) ဦး ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရကာ တစ်ဦး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းပြင် အရပ်သား (၄) ဦးသည်လည်း ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ထို့ပြင် အသံအဖွဲ့၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ကိုစည်သူအောင်(ခ)မောင်ဆောင်းခသည်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တွင် အင်တာနက်လိုင်းများပြန်ဖွင့်ပေးရန် လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းအတွက် ငြိမ်း၊စု၊စီဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ ဖြင့် ဒဏ်ငွေချမှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ထို့အတူ နှစ် ၇၀ ပြည့် ကရင်အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ စသိန်းဇော်မင်း၊ စောစကွာလာနှင့် ဒေါ်စိန်ထွေးတို့သည် ငြိမ်း၊စု၊စီဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀ ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၁၅ ရက်စီ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်၊ပြောဆိုခွင့်အခြေအနေ မည်မျှလောက်ထိ ဆိုးရွားစွာ ကျဆင်းလျက်ရှိသည်ကို အထက်ပါ ဖြစ်စဉ်များမှ ထင်ရှားစွာ ပြသလျက်ရှိသည်။ ၎င်းပြင် ထိုအခွင့်အရေးကို ကန့်သတ်ထားသော ဥပဒေများဖြစ်သည့် ငြိမ်း၊စု၊စီဥပဒေ နှင့် ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)(ခ) တို့ကို ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးခြင်းသည်လည်း လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နယ်ပယ်ကို ပို၍ ကျဉ်းမြောင်းသွားစေသည်။ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းသည် လူ့အခွင့်အရေးကို ပိတ်ပင်ထားခြင်းဖြစ်သည့်ပြင် ဒီမိုကရေစီကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် နှောင့်နှေးစေသော အခြင်းအရာလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံသားတိုင်း၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်၊ပြောဆိုခွင့်ကို လေးစား၊ လိုက်နာသော အားဖြင့် ထိုအခွင့်အရေးကို ကျင့်သုံးခဲ့၍ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ နှင့် ထောင်တွင်း နှင့် ထောင်ပြင်ပမှ တရားရင်ဆိုင်နေရသူများကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးခြင်း၊ ဖိနှိပ်ထားသောဥပဒေများအား ပြင်ဆင်/ဖြည့်စွက်ခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ထို့ပြင် လက်ရှိကာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ကိုဗစ်–၁၉ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါ ကူးစက်နှုန်း မြင့်မား နေချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကာလအတွင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသော တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ အရပ်သားများ နှင့် ကျောင်းသားများအား ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည် အကျဉ်းထောင်တွင်း မလိုလားအပ်သော လူဦးရေ ပြည့်သိပ်မှုကို ထပ်မံဖြစ်ပေါ်စေသည့်အတွက် ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး၌လည်း ထိရောက်မှုရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့ အမှတ် (၁) ရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိ (၂) ဦး ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်း ခံခဲ့ရပြီးနောက် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ တစ်နေ့တည်းတွင်ပင် စစ်တွေမြို့ အမှတ် (၁) ရဲစခန်း၌ ရဲဝန်ထမ်း (၂၂) ဦး နှင့် အချုပ်သား (၁၉) ဦးတို့ သည် ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းခံထားရကြောင်း သိရှိရသည်။ ထိုအခြင်းအရာသည် အကျဉ်းထောင်များ၊ အချုပ်ထောင်များ နှင့် ရဲဘက်စခန်းများရှိ အကျဉ်းသားများအတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အနေအထား တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး အကျဉ်းထောင်တွင်း အကျဉ်းသားဦးရေ ထူထပ်လျက်ရှိခြင်းကြောင့် ကူးစက်မှု ဖြစ်ပေါ်ပါက ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ခက်ခဲမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိအချိန် ကာလအတွင်း မလိုလားအပ်သော ဖမ်းဆီးမှုများကို ရပ်တန့်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အကျဉ်းသား၊ အချုပ်သား မည်မျှအထိ ကူးစက်ခြင်းခံထားရသည်၊ မည်ကဲ့သို့ တားဆီး ကာကွယ်မှုများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်တို့ကိုလည်း ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားရန်လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း သုံးသပ်အပ်ပါသည်။
ဖိနှိပ်ထားသောဥပဒေများအား ပြင်ဆင်/ဖြည့်စွက်ခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပချိန် နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ နိုင်ငံရေးပါတီတချို့သည် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှု များကို ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ရွေးကောက်ပွဲအချိန်ကာလတွင် နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ မူဝါဒ၊ ၎င်းတို့ လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ထင်မြင်ယူဆချက်များနှင့် လက်ရှိအချိန်ကာလတွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် အကြောင်းခြင်းရာများကို ပြည်သူ များအား လွတ်လပ်စွာ ချပြပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့မှသာလျှင် ပြည်သူများသည် ၎င်းတို့ယုံကြည်ရာ နိုင်ငံရေးပါတီကို မဲပေး နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် ထုတ်လွှင့်ပေးမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ မဲဆွယ်ဟောပြောခြင်း မိန့်ခွန်းများကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်(UEC)မှ ဆင်ဆာ ဖြတ်တောက်မှုများရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ မိန့်ခွန်းဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းခံခဲ့ရသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှာ ထားဝယ် တိုင်းရင်းသားများပါတီ၊ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(DPNS)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ(NDF)၊ ပြည်သူ့ပါတီ၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ(ANP)၊ ရခိုင် ဦးဆောင်ပါတီ(AFP) နှင့် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(ALD) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆင်ဆာ ဖြတ်တောက်ခြင်းကြောင့် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(DPNS)၊ ပြည်သူ့ပါတီ နှင့် ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီ(AFP) တို့သည် မိန့်ခွန်းပြောသည့် ရုပ်သံ ရိုက်ကူးခြင်းကို ဆောင်ရွက်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထိုအခြင်းအရာသည် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုပိုင်ခွင့် နှင့် လွတ်လပ်စွာ မဲဆွယ်ခွင့်တို့ကို ကန့်သတ် ပိတ်ပင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနှုန်းနှင့်လည်း ကိုက်ညီခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ပြည်သူများ၏ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်များ ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိစေရန် ထိုကဲ့သို့ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုများကို ပြန်လည် စိစစ် သုံးသပ်ပေးပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်း၌ ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခများဆက်လက်ဖြစ်ပွားဆဲဖြစ်ပြီး လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစားလိုက်နာမှု နှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုသည်မှာ စစ်မက်ဖြစ်ပွားရာ ဒေသများတွင် ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကိုဗစ်–၁၉ အသက်ရှု လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါ ကူးစက်မှုနှုန်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူ တိုင်းရင်းသား ဒေသများအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု များသည်လည်း ဆိုးရွားစွာ မြင့်တက်လာလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ အထူးသဖြင့် ရခိုင်ဒေသတွင်နေထိုင်ကြသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများသည် ကိုဗစ်–၁၉ ကူးစက်ရောဂါ ကာလအတွင်း ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ်ကို ဆိုးရွားစွာ ရင်ဆိုင်ခံစားနေကြရ သည်သာမက အမျိုးမျိုးသော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ရင်ဆိုင်နေကြရသည်မှာ အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ဖြစ်စဉ်များအနက်မှ ဖြစ်စဉ်တချို့ကို အောက်တွင် ကောက်နုတ်ဖော်ပြထားပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ အောင်တိုက်အုပ်စု၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်မှ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူ ဦးအေးကျော် သည် တပ်မတော် တပ်ရင်း ၃၇၇ ၏ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်း သေဆုံးသွားခဲ့ခြင်း (ဦးအေးကျော်သည် စစ်ကြောင်းအဖွဲ့ဝင်၏ ပစ္စတိုသေနတ်အားလုယူ၍ မိမိကိုယ်ကို ပစ်ခတ်ခဲ့၍ ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်)
တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတစ်ခုမှ လမ်းပြအဖြစ် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ ဘုရားပေါင်းကျေးရွာမှ မောင်ညွှန့်ဝင်းနှင့် ကိုဟန်မောင်သိန်း တို့ကို သေနတ်ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးလျက် ပြန်လည် တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း (၎င်းတို့အား ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာစဉ် ဘုရားပေါင်းကျေးရွာအနီးအရောက်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲ ခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့နှစ်ဦးကို မသင်္ကာ၍ပစ်သတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သေဆုံးသူ ကိုဟန်မောင်သိန်း၏ ဖခင် ဦးစံထွန်းလှမှ ပြောကြားခဲ့သည်)
ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) အတွက် ရိက္ခာသိုလှောင်ထားသည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံထားရသော ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်၊ စပါးထားကျေးရွာမှ ဆန်စက်ပိုင်ရှင် ဦးရဲကျော်ထွန်းနှင့်ဆက်နွယ်၍ စပါးထား ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမောင်သိန်းစိုးသည် ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံခဲ့ရကာ ဦးရဲကျော်ထွန်းနှင့်အတူ ဖမ်းမိခဲ့သည့်ဆန်အိတ်များသည် ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) ၏ ရိက္ခာများဖြစ်သည်ဟု အတင်းအဓမ္မထွက်ဆိုခိုင်းခဲ့၍ ဝန်ခံခဲ့ရခြင်း (ထို့ပြင် ဦးရဲကျော်ထွန်းကို နှိပ်စက်နေသည့်အသံများကိုလည်း ကြားခဲ့ရသည်ဟု ဦးမောင်သိန်းစိုး၏တူဖြစ်သူ ကိုကျော်ခိုင်မှ ပြန်လည် ပြောကြားခဲ့သည်)
ရခိုင်ပြည်နယ်၊မြေပုံမြို့နယ်၊ မြိုင်သာယာကျေးရွာမှ ဒေသခံနှစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုထွန်းမြင့်သန်း နှင့် ကိုမြင့်မောင်တို့ကို တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတစ်ခုမှ ဖမ်းဆီး၍ ရိုက်နှက်စစ်ဆေးခဲ့သည့်အတွက် ကိုမြင့်မောင်သည် ဦးခေါင်းကွဲသွားခဲ့ပြီး ကိုထွန်းမြင့်သန်းတွင် မျက်နှာတစ်ပြင်လုံး ရောင်ရမ်းသွားခဲ့ခြင်း
တပ်မတော်စစ်ကြောင်းမှ ဖမ်းဆီး၍ ရိုက်နှက်ထားသည့်အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ သာစည် ကျေးရွာဒေသခံ ဦးမောင်ညွှန့်စိန်၏သားဖြစ်သူသည် စိုးရိမ်ရသည့်အခြေအနေရှိသည်ဟု သိရှိရခြင်း
တပ်မတော်စစ်ကြောင်းမှ ဖမ်းဆီးထားသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်မှ ဒေသခံ ၁၁ ဦးသည် ရိုက်နှက် စစ်ဆေးခြင်းကို ခံခဲ့ရခြင်း
ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရရှိမှုများ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရသေ့တောင်၊ ကျောက်တော် နှင့် မြောက်ဦးမြို့နယ်များတွင် ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ၁၀ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးအပါအဝင် အရပ်သား သုံးဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုး နှင့် သီပေါနယ်တို့တွင် အရပ်သား နှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး တစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ သည်။
လက်နက်ကြီးကျည် ကျရောက်မှုကြောင့် သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရရှိမှုများ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်၊ ရသေ့တောင် နှင့် မြေပုံမြို့နယ်တို့တွင် လက်နက်ကြီးကျည်ကျရောက် ပေါက်ကွဲမှု များကြောင့် ကလေးငယ် ခြောက်ဦး အပါအဝင် အရပ်သား ၂၈ ဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ကလေးငယ် နှစ်ဦး အပါအဝင် အရပ်သား ငါးဦး သေဆုံး ခဲ့သည်။
မြေမြုပ်မိုင်း ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းကြောင့် သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရရှိမှုများ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် နှင့် ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်တို့တွင် မြေမြုပ်မိုင်း ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းကြောင့် အရပ်သား တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ငါးဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ရခိုင်ဒေသအတွင်းရှိ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများသည် ကိုဗစ်–၁၉ ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်း ပြင်းထန်သော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုဒဏ်ကို မည်ရွေ့၊မည်မျှအထိ ရင်ဆိုင်ခံစားနေကြရသည်ကို အထက်ပါဖြစ်စဉ်များမှ ထင်ရှားစွာ ထုတ်ဖော်ပြသ လျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော ပြည်တွင်းစစ် နှင့် ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်း ဒေသခံတိုင်းရင်းသား များအပေါ်ကျူးလွန်သည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ရန်တန့်ရန် နည်းလမ်းများကို အမြန်ဆုံးရှာဖွေ၍ ဆောင်ရွက်ရ မည်ဖြစ်ပြီး တစ်စတစ်စ မြင့်တက်လာသည့် ကူးစက်ရောဂါ ကြိုတင် ကာကွယ်၊တားဆီးရေးလုပ်ငန်းများကို အဆိုပါဒေသများ အတွင်း ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးတွင် အကြမ်းဖက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ ရှိသည့်နေရာများ ပါဝင်ခြင်း မရှိပါ။ ထိုအခြင်းအရာသည် တိုက်ပွဲများထပ်မံဖြစ်ပွားလာစေမည်ကို ရည်ညွှန်းစေပြီး လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ထပ်မံ ဖြစ်ပွားလာစေနိုင်မည်ကို ညွှန်းဆိုပြသနေသည်။ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှုးချုပ် အန်တိုနီယိုဂူတဲရက်စ်၏ ကိုဗစ်–၁၉ နှင့် လူ့အခွင့်အရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် COVID-19 တုန့်ပြန်မှု၌ နိုင်ငံတချို့သည် လူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက် သော နည်းလမ်းများဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့် လုံခြုံရေး အစီအမံများကို အသုံးပြုရန် ရှာဖွေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်၊ ထိုကဲ့သို့သော ချိုးဖောက်မှုများသည် အကြမ်းဖက်မှုကို ပျံ့နှံ့စေသည့် အခြေအနေများကို မီးထိုးပေးသည် ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် လူ့အခွင့်အရေး နှင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာတို့ကို လေးစားလိုက်နာသောအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း အားဖြင့်လည်းကောင်း လက်ရှိအခြေအနေများတွင် ထိခိုက်မှု အများဆုံးဖြစ်နေသည့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများကို ကာကွယ်မှုများပြုပေးပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍ၏ ချို့ယွင်းချက်များ (အထူးကဏ္ဍ)
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး(AAPP)မှ အထူးကဏ္ဍတစ်ရပ်အနေဖြင့် ထည့်သွင်း ဖော်ပြလိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရာစီရင်ရေးကဏ္ဍ ယိမ်းယိုင်ခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ် အဆက်ဆက်တိုင်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အာဏာရှင်များလက်ထက်၌ မျှတသော တရားစီရင်ရေးဆိုသည်မှာ အာဏာအုပ်စိုးမှုများ အောက်တွင်သာ ကျရှုံးနေခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း အသွင်ကူးပြောင်းကို ဖော်ဆောင်လျက်ရှိသော ယခု မျက်မှောက်ကာလ ထိတိုင်အောင် မျှတသော တရားစီရင်ရေးအတွက် ထိရောက်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးခြင်း သည်လည်း စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိုအခြေအနေများကို သိသာထင်ရှားစွာ ဖော်ပြလျက်ရှိ သည်မှာ ရခိုင့်အရေးနှင့်ဆက်နွယ်၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသော ကျောင်းသားများကို ပုဒ်မအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖမ်းဆီး၊ တရားစွဲဆို၊ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လျက်ရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၌ ၎င်းတို့နှစ်ဦးကို တရားစွဲဆိုထား သည်ကို ကာယရှင် နှင့် မိသားစုများပင်လျှင် သိရှိရခြင်းမရှိဘဲ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေ တရားရုံးမှ ၎င်းတို့ နှစ်ဦးကို ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် ထောင်ဒဏ် (၂) နှစ်၊ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ဖြင့် ထောင်ဒဏ် (၂) နှစ်တို့ကို တစ်ပေါင်းတည်းကျခံစေရန် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ထောင်ဒဏ် (၂) နှစ်ကျခံရမည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် မဟာအောင်မြေမြို့နယ် တရားရုံး၌ ရုံးချိန်းတစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ တက်ရောက်ခွင့် မရခဲ့ဘဲ၊ ခုခံချေပခွင့်လည်း မရခဲ့ဘဲ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သည့်နေ့တွင်သာ တရားရုံးကို ခေါ်ဆောင်၍ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ရခိုင့်အရေးနှင့်ဆက်နွယ်၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည့် ကျောင်းသား စုစုပေါင်း ၃၄ ဦး တရားစွဲဆိုခြင်းခံခဲ့ရပြီး ၎င်းတို့အနက်မှ ကျောင်းသား သုံးဦးသည် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရ သော ကျောင်းသုံး သုံးဦးအနက် ကျောင်းသား နှစ်ဦးဖြစ်ကြသည့် ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့မှ ရုံးအဖွဲ့မှူး ကိုကျော်သီဟရဲကျော် နှင့် သက်မွေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အတွင်းရေးမှူး ကိုစိုးလှနိုင် တို့သည် မျှတသော တရားစီရင်ရေးကို ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အဆိုပါဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုအတွက် ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် အမရပူရ နှင့် မဟာအောင်မြေ မြို့နယ် နှစ်ခု၌ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊(ခ) တို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုခြင်းကို ခံထားရသည်သာမက ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၌ လည်း ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့် နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲ မှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ တို့ဖြစ်လည်း တရားစွဲဆိုခြင်းကို ခံထားရသည်။ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၌ ၎င်းတို့နှစ်ဦးကို တရားစွဲဆိုထား သည်ကို ကာယရှင် နှင့် မိသားစုများပင်လျှင် သိရှိရခြင်းမရှိဘဲ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေ တရားရုံးမှ ၎င်းတို့ နှစ်ဦးကို ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် ထောင်ဒဏ် (၂) နှစ်၊ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ဖြင့် ထောင်ဒဏ် (၂) နှစ်တို့ကို တစ်ပေါင်းတည်းကျခံစေရန် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ထောင်ဒဏ် (၂) နှစ်ကျခံရမည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် မဟာအောင်မြေမြို့နယ် တရားရုံး၌ ရုံးချိန်းတစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ တက်ရောက်ခွင့် မရခဲ့ဘဲ၊ ခုခံချေပခွင့်လည်း မရခဲ့ဘဲ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သည့်နေ့တွင်သာ တရားရုံးကို ခေါ်ဆောင်၍ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗကသ ကျောင်းသားများသည် တရားရုံးကို သပိတ်မှောက်ထားသည်ဟု သိရှိရသော်လည်း တရားလိုများ၊ သက်သေများကို ခေါ်စစ်ရန် တို့မှာ သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးတိုင်း၏ တာဝန်ပင် ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ မှန်ကန်၊မျှတမှုရှိသော အဆုံးအဖြတ်ကို ချမှတ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် ထိုကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်မှုမျိုးကို ရရှိခံစားပိုင်ခွင့်မရှိခဲ့ပါ။ ထို့အခြင်းအရာမှ တရားရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး များ ဆုံးရှုံးလျက်ရှိသည်ကို သိသာစွာ ထုတ်ဖော်ပြသလျက်ရှိသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာ စာတမ်း (UDHR) အပိုဒ် ၆ နှင့် အပိုဒ် ၇ နှင့် နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်(ICCPR) အပိုဒ် ၁၆ တို့၌ “လူတိုင်းတွင် ဥပဒေအရာ၌ လူသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ ဥပဒေ၏ အကာအကွယ်ကို တူညီစွာ ခံစားပိုင်ခွင့် ရှိသည်” ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် တရားဥပဒေရှေ့မှောက်၌ အသိအမှတ်ပြုပိုင်ခွင့် နှင့် ဥပဒေ၏ အကာအကွယ်တို့ကို ရရှိခြင်းမရှိခြင်းကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။
ထို့ပြင် အထက်ပါ အမှုဖြစ်စဉ်မှ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်း သာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်မဟုတ်သည့် တရားစီရင်ရေး ဖြစ်သည်ကို ထင်ရှားစွာ ညွှန်းဆိုပြနေသည်။ ကူးစက်ရောဂါကာလတွင်း အကျဉ်းထောင်တွင်း လူဦးရေပြည့်သိပ်လျက်ရှိ နေသည်ကို ဖြေလျှော့ပေးရမည့်အစား ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းကို ရာဇဝတ်မှုမြောက်သကဲ့သို့ အစောတလျင် ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းသည် နောင်ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းများကို ရပ်တန့်သွားစေရန် သတိပေးဟန့်တားသည့် သဘောကို ဖော်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ သို့ဖြစ်၍ အသွင်းကူးပြောင်းလျက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍကို မေ့လျော့မထားသင့်ဘဲ မှန်ကန်၊မျှတသော တရားစီရင်ရေးစနစ် ဖြစ်ထွန်းလာစေရန် အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ရေးစနစ်သည် (Common Law Legal System) ကို အခြေခံထားသောစနစ်ဖြစ်သည့်အလျောက် တရားစီရင်ရေးစနစ်တွင် ပြုပြင်၊ ပြောင်းလဲသင့်သည် များကို ပြုပြင်၊ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြုပြင်ရာတွင် အမှီအခိုကင်းသော၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသော၊ မျှတမှုရှိသော တရားရေးကဏ္ဍဖြစ်ထွန်းလာစေရန် ပြုပြင်၊ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများကို ကန့်သတ်ထားသော ဖိနှိပ်ထားသည့်ဥပဒေများကိုလည်း အမြန်ဆုံး ပြင်ဆင်၊ဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ပြုပြင်၊ ပြောင်းလဲမှုများကို ခြေလှမ်းသစ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ဦးဆုံးဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကို အမြန်ဆုံး ဖွဲ့စည်းပါရန် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) မှ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
တိတ်နိုင် (အတွင်းရေးမှူး) +၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၀၂ ၃၈၂၈
ဘိုကြည် (တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး) +၉၅(၀) ၉၄၂ ၅၃၀ ၈၈၄၀
အောင်မျိုးကျော် (ရန်ကုန်ရုံးတာဝန်ခံ) +၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၁၁ ၇၃၄၈
ဒေါင်းလော့ရယူရန် Chronology September Myanmar (Final)
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစာရင်းဒေါင်းလော့ရယူရန် 32 Remaining PP list Burmese
အမှုရင်ဆိုင်စာရင်းဒေါင်းလော့ရယူရန် 539 Facing Trial List (Burmese) Updated on 30 September 2020
၆၆(ဃ) အမှုရင်ဆိုင်စာရင်းဒေါင်းလော့ရယူရန် 66 (D) total list(new) Updated